Originals [Made for success]
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံလေးနဲ့ MultiStart Series ဖြစ်ပါတယ်။ Notebook ထည့်တဲ့နေရာကို အကြမ်းခံအောင် ကူရှင်နဲ့ချုပ်လုပ်ထားပြီးအလေးချိန်လေးလေးပင်ပင် ဆွဲပြီးသွားလာ ခဲ့ရင်တောင်ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့လက်ဆွဲကိုင်းပါရှိပါတယ်။ခိုင်ခံ့တဲ့ Frame ကြောင့် အိတ်ထောင့်တွေကို ပြင်းပြင်းထန် ထန်ရိုက်မိခဲ့ရင်တောင် သင့်ရဲ့ NoteBook ကိုမထိ ခိုက်နိုင်ပါဘူး။ Multi Start Art. Nr : N14558P (Black) Material : Polyester
Dimensions : 16.1 x 12.4 x 3.9 inch
For Notebooks up to : 15.4 "
နက်ဘုတ် ( Netbook ) ချစ်သူများ အကြိုက်တွေ့နေ့
တဲ့ Smart Skin လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့တဲ့အ သားနဲ့ ချုပ်လုပ်ထားပြီး Power Adapter, Mouse စ
တဲ့ Accessories တွေထည့်ဖို့အတွက် ရှေ့အိတ်တစ်
ခုနဲ့ ဘေးအိတ် တစ်ခု ပါရှိပါတယ်။ သင့် Notebook အသွင်းအထုတ်များကို ခြစ်ရာစင်းရာမထင်အောင် အတွင်းအိတ်အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Smart Skin Art. Nr : N22338N (Black) Weight : 0.28 kg
Dimensions : 13 x 10.2 x 1.6 inch
For Notebooks up to : 10"-12.1", 13", 14.1" as well as 15"-16.4"
ကျောင်းသွားသွား၊ ရုံးသွားသွား သင့်ရဲ့ဂုဏ်ရှိန်ဝါကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် Dicota ရဲ့ Easy Top Series အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ဘက်မှ အလွယ်တကူ သွင်း၊ထုတ်နိုင်တဲ့ Toploader အိတ်အမျိုး အစားဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအကန့်နှစ်ကန့် ပါဝင်လို့ Notebook အပြင် စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပါ တပါတည်း သယ်ယူသွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘောလ်ပင် ၊ PDA ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ Business Card စတာတွေကို အလွယ်တကူ ထည့်ထားနိုင်တဲ့ အရှေ့အိတ် တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ အိတ်ပတ်ပတ်လည်ကို သိပ်သည်းဆမြင့်မားတဲ့ ရေမြှုပ် (HDF, High-Density Foam) ကိုအသုံးပြုထားလို့ တခုခုနဲ့ဆောင့်မိ တာမျိုးမတော်တဆထိခိုက်မိတာမျိုးတွေကြောင့် သင့် Notebook ပျက်စီးမှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ် ပေးပါလိမ့်မယ်။ Easy Top Art. Nr : N19218P (Black) Material : Polyester / Microfiber
Dimensions : 16.5 x 13.8 x 4.9 inch
For Notebooks up to : 15.4"
ခရီးသွားများသူများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Dicota ရဲ့ Top Traveler Series ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားတဲ့အခါ Nootbook ကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင် သိပ်သည်းဆမြင့်မားတဲ့ ရေမြှုပ် (HDF Layer) နဲ့ ပတ်ပတ်လည် ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ Strongbox ပါဝင်လို့ မတော်တဆ ထိမိ ခိုက်မိတဲ့ဒဏ်ကို အပြည့်အဝခံနိုင်ရည်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်းတွေအပြင် Portable Printer လိုမျိုးကြီးမားတဲ့ Device တွေထည့်သွင်းသွားနိုင်တဲ့ အကန့်ကျယ်တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။Nootbook Power Adapter ၊ Universal Plug ၊ လွယ်ကြိုး စတာတွေ သီးသန့်ထည့်သွင်းထားနိုင်ပြီး အလွယ်တကူ ထုတ်ယူအသုံးပြု နိုင်တဲ့အိတ်ငယ်တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။
Top Traveler Compact Art. Nr : N17118N (Black)
Dimensions : 16.3 x 12.4 x 4.3 inch
For Notebooks up to : 14.1"
Short Business Trip မကြာခဏသွားလေ့ရှိသူများအတွက် ခရီးဆောင်အဝတ်တွေနဲ့ Notebook တို့ကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းသွားနိုင်တဲ့ Mobile Commuterဖြစ်ပါတယ်။ သော့ခတ်ထားနိုင်တဲ့ အဝတ်အစား တွေထည့်ဖို့အကန့်တကန့်ပါဝင်ပြီး Notebook ထည့်ဖို့အကန့် တကန့်ပါဝင်ပါတယ်။ Notebook ကို အပြင်ကိုသယ်သွားနိုင်ဖို့အတွက် အိတ်ငယ်တစ်လုံး သီးခြား ပါဝင်ပါတယ်။ ဆန့်ထုတ်နိုင်တဲ့ လက်ကိုင် ကိုင်းနဲ့ အိတ်ခံဘီးတွေပါဝင်တာကြောင့် အိတ်ကို အလွယ်တကူဆွဲသွားနိုင်ပါတယ်။
Mobile Commuter Art. Nr : N4598N (Black) Material : Nylon
Dimensions : 17.7 x 14.8 x 8.9 inch
[Another life. Another Style.]
သွားသွားလာလာများတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ Notebook ရောစာရွက် စာတမ်းတွေပါခပ်များများ သယ်သွားလေ့ရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် Smart ကျကျသယ် ကျောကူရှင်အခံကြောင့် အိတ်ရဲ့အလေးချိန်ကို လမ်း လျှောက်နှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိစေပြီး အလေးချိန်လျော့နည်းစေပါတယ်။
Bac Pac Broker Art. Nr : N9608N (Black) Material : Nylon
Dimensions : 13.4 x 16.5 x 6.3 inch
Accessories ခပ်များများသယ်သွားတတ်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေ အတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Bac Pac Businessဖြစ်ပါတယ်။ အိတ်ပုံစံကို ခပ်ပါးပါးနဲ့ လိုအပ် တဲ့အသုံးအဆောင်တွေအကုန်ထည့်သွင်းသွားနိုင်ရန် စနစ်တကျပုံဖော်ထားပြီး မတော်တဆရေစိုခဲ့ရင် တောင်ရေစိမ့်မဝင်တဲ့ နိုင်လွန်သားနဲ့ချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။
Bac Pac Business Art. Nr : N16318N (beige)
Art. Nr : N163?8N (beige) Material : Nylon Weight : 0.95 kg
Dimensions : 13 x 17.7 x 5.1 inch
█ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအားကစားသမားများနဲ့ပြေးပြေးလွှားလွှားကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် အလေးချိန်အပေါ့ဆုံးဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းဖော်ထုတ်လုပ်ထားပြီး 0.6 kg သာရှိတဲ့ Bac Pac Easy ဖြစ်ပါတယ်။ မတော်တဆရေစိုမှုတွေခံနိုင်အောင် ပုံဖော်ချုပ်လုပ်ထားပြီး သွားရင်းလာရင်း သီးချင်းနားထောင်ဖို့ ရေစိမ့်ဝင်မှုမရှိတဲ့နားကြပ်ထုတ်အပေါက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Bac Pac Easy Art. Nr : N17178P (red/white) Art. Nr : N17168P (green/white)
Art. Nr : N17158P (black/white) Material : Polyester
Dimensions : 13.8 x 17.7 x 7.9 inch
မိုးတွင်း အပြင်သွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကျောင်းသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် သင့် Notebook မိုးစိုမှာအမြဲစိုးရိန်ပူပန် နေရတယ်ဆိုရင်တော့ Bac Pac Rain ကိုသင်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ မိုးရွာတဲ့အခါ အသင့်ပါရှိတဲ့ မိုးကာလေးကိုထုတ်ပြီး စွပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ သင့်အိတ်ဟာမိုးရေဒဏ်ကနေ လုံခြုံသွားပြီပေါ့။
Bac Pac Rain Art. Nr : N7048P (blue) Art. Nr : N7198P (brown)
█ လူကြီးလူငယ်မရွေးအသုံးပြုနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Smart Series ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရေအစိုခံသောအသားဖြစ်ပြီး ဇစ် ကနေမိုးရေမဝင်နိုင်အောင်လည်း ဒီဇိုင်းဖော်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Bac Pac Smart Art. Nr : N17768P (Black)
လူငယ်တို့သဘာဝ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတဲ့ ပုံစံနဲ့ အိတ်ကို တခုခုပေါ် ပစ်တင်တာမျိုးဆိုရင်တောင် အထဲက Notebook ကို မထိခိုက်အောင် ဒီဇိုင်းဖော်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Sport Series ဖြစ်ပါတယ်။
Take Off Sport Art. Nr : N7048P (blue)
Art. Nr : N7198P (brown)
█ ရေစိမ့်မဝင်နိုင်တဲ့ ဇစ်ကိုအသုံးပြုချုပ်လုပ်ထားတဲ့ Bac Pac Control ဖြစ်ပါတယ်။ ထူခြားတဲ့အချက်က တော့ သင့်ရဲ့ iPod Player ကို လွယ်အိတ်ကြိုးပေါ်မှ အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Bac Pac Control(Make For Apple)Art. Nr : N21558P (black)
Art. Nr : N21548P (grey)
For Notebooks up to : 13.3"
█ လူငယ်တို့အကြိုက်ဘေးလွယ်အိတ်ပုံစံနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Take Controlဖြစ်ပါတယ်။ iPod Player ကို ဘေးအိတ်ထဲထည့်ပြီး Controler နဲ့ချိတ်ဆက်ကာ လွယ်အိတ်ကြိုးပေါ်မှ စိတ်တိုင်းကျ ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Take Control(Make For Apple) Art. Nr : N21538P (black)
Art. Nr : N21528P (grey)
█ အဆန်းသစ်ဆုံးဒီဇိုင်းနဲ့ EMO စတိုင်လ် Notebookဘေးလွယ်အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှလှန်ဖွင့်ရသော လျှာထိုး ကပ်ခွာပုံစံချုပ်လုပ်ထားပြီး Notebook ထည့်သောအကန့်အပြင် စာရွက်စာတမ်းများထည့်သွင်းနိုင်သော အကန့် တစ်ကန့်၊ Power Adapter ၊ ဖုန်း စတဲ့ Accessoriesတွေထည့်သွင်းဖို့ အကန့်တွေ စုံစုံလင်လင် ပါဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Non-skid လွယ်အိတ်ကြိုးကြောင့် အလေးချိန်များလာတဲ့အခါ ပုခုံးပေါ်က အိတ်လျှောကျမသွားအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Pep Up Junior Art. Nr : N15388P (black)
Art. Nr : N15378P (grey)
Dimensions : 17.7 x 13.8 x 3.5 inch
For Notebooks up to : 15"
█ Executives [High performance.]
တက်တက်ကြွကြွသွားလာလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Lady Spiritဖြစ်ပါတယ်။ Notebook အိတ်ပုံစံနဲ့မတူဘဲ အမျိုးသမီးလက်ကိုင်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ ပိုတူ ပါတယ်။ လွယ်အိတ်အနေနဲ့လည်း လွယ်သွားနိုင်ပြီး ရိုးရိုးလက်ကိုင်အိတ်အနေနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ လွယ်ကြိုးကွင်းကိုမမြင်အောင် သိမ်းထားလို့ရတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ပုံဖော်ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Lady Spirit Art. Nr : N6198K (Black) Material : Koskin / Nylon
Dimensions : 14.8 x 12.2 x 3.7 inch
ကြော့ရှင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Lady Style Notebook အိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ကျီ အဝတ်အစားနဲ့ ဖက်ရှင်တကျကိုင်ဆောင်နိုင်ရန် အရောင်သုံးရောင် ခွဲခြား ထားပြီး မိတ်ကပ်ဘူး၊ နှုတ်ခမ်းနီးဘူး စတဲ့ အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်တွေ ထည့်ထားနိုင်တဲ့ အိတ်ငယ် တစ်အိတ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။
Lady Style Art. Nr : N15948P (Black)
Art. Nr : N15968P (grey) Art. Nr : N15958P (brown) Material : Polyster
Dimensions : 15 x 12.8 x 3.9 inch
█ Accessories [Must Have.]
Brilliant Gel II Cosmos Power DICOTA logo, Standard, Quality and Technology are trademark of DICOTA.